Yakanakisa Kaviri kutumira ingroud kusimudza akateedzana L5800 (B) Mugadziri uye Fekitori | Tonghe
Kaviri kutumira ingroud kusimudza akateedzana L5800 (B)
LUXMAIN kaviri post inground lift inosundwa ne electro-hydraulic. Chikwata chikuru chakavigwa zvachose pasi pevhu, uye ruoko rwekutsigira pamwe neyesimba zviri pasi. Mushure mekunge mota yasimudzwa, nzvimbo iri pazasi, kuruoko uye pamusoro pemotokari yakavhurika zvachose, uye murume-muchina nharaunda yakanaka.Izvi zvinonyatso chengetedza nzvimbo, zvinoita kuti basa riite nyore uye riite, uye nzvimbo yemusangano yakachena uye safe. Inokodzera mota makanika.
Kaviri post inground lift, huru unit iri pasi pevhu. Mushure mekunge mota yakasimudzwa, yepazasi, yakatenderedza uye yepamusoro nzvimbo dzinovhurika zvachose pasina chipingaidzo uye chipingaidzo. Kupasa kwevashandi pakati pemidziyo yakawanda kwakanaka, iko kushanda kwekuchengetedza kwakachengeteka, kuri nyore uye kunoshanda, uye nzvimbo yemusangano yakashambidzika uye yakajairwa.
Kune mhando dzakasiyana dzeruoko rwekutsigira LUXMAIN inground lift, senge kutenderera telescopic mhando, zambuko mhando, uye yakarongedzwa neyechipiri yekusimudza rori. Ruoko rwekutsigira runogona kumiswa pasi kana kunyura muvhu kujairira nharaunda dzakasiyana uye kushandisa zvido.
LUXMAIN inground lift inosungirirwa ne mechanical uye hydraulic kaviri kuchengetedza nzira. Kana iyo michina ikakwira kune yakatarwa kukwirira, iyo mechiki yekukiya inongoerekana yakiyiwa, uye vashandi vanogona zvakachengeteka kuita ekuchengetedza mashandiro. Iyo hydraulic yekupwanya mudziyo, mukati mehurefu hwekusimudza huremu hwakagadzwa nemidziyo, kwete chete inovimbisa kukurumidza kukwira kumhanya, asi zvakare inovimbisa kuti iyo kusimudza inodzika zvishoma nezvishoma muchiitiko chemakaniki kukiya kutadza, oiri pombi kuputika uye mamwe mamiriro akaipisisa kudzivirira nekukurumidza nekukurumidza kukurumidza kudonha zvichikonzera tsaona yekuchengetedza.
Iwo maviri mapfumo ekusimudza akasunganidzwa nesimbi yekuenzanisa simbi kuona kuti zviito zvekusimudza zvezvikamu zviviri zvekusimudza zvakanyatsoenderana. Mushure mekugadziriswa kwemidziyo, hapana kuyerwa pakati pezvikamu zviviri. Inofananidzwa neyakajairika miviri positi inosimudza, ivo vanofanirwa kuitiswa nguva nenguva panguva yekushandisa. Iine hunhu hwekugadzirisa mwero, iyo inound lift inosimudzira yakawanda nguva uye mutengo.
Mushure memakore ekuvandudza, LUXMAIN yakaposita post inground lift yakagadzira chigadzirwa chechigadzirwa chakapfuma, ichifukidza huwandu hwehutakuri hunotakura (3500kg-5000kg), dzakasiyana nzvimbo dzekumisidzana (1360mm-2350mm), dzakasiyana ruoko rwekutsigira ruoko (kutenderera telescopic mhando, zambuko mhando), inokodzera kugadzirisa zvitoro uye DIY inogona kusangana zvakasiyana siyana zvekuchengetedza zvinodiwa (injini, gearbox, chassis, muviri).
Inokodzera kugadzirisa mota, kuongorora kwekuita mota, DIY.
Muchina wese unotora chirongwa chekudzora, izere nemagetsi hydraulic dhiraivha, chikuru unit uye ruoko runotsigira rwakanyura zvachose muvhu, pasi rakafukidzwa ne otomatiki chifukidziro, uye ivhu rakaenzana.
Iyo yemagetsi yekudzora kabhodhi iri pasi uye inogona kuchinjika yakaiswa zvinoenderana nezvinodiwa. Iyo yekudzora kabhodhi yakagadzirirwa ne emergency emergency stop bhatani, iyo inoshandiswa pakumisa emergency. Chinja chemagetsi chikuru chakakiyiwa nekiyi uye chinonyanya kutarisirwa nemunhu akazvipira kuona kuchengetedzwa kwekuita.
Rutsigiro ruoko flip butiro ndeye 3mm pateni simbi ndiro uye mativi chubhu furemu rinotakura-rinotakura chimiro, uye mota inogona kupfuura zvakajairika kubva kumusoro.
Dzese michina yekukiya yekuvhura mashandiro uye iyo yekuvhara yekutendeuka mashandiro ari hydraulically anotyaira, ayo akavimbika muchiito uye akachengeteka kushandisa.
Iyo hydraulic yekupwanya mudziyo, mukati mehurefu hwakasimudza huremu hwakagadzwa nemidziyo, kwete chete inovimbisa kukurumidza kukwira kumhanya, asi zvakare inovimbisa kuti iyo kusimudza inodzika zvishoma nezvishoma muchiitiko chemakaniki kukiya kutadza, oiri pombi kuputika uye mamwe mamiriro akaipisisa kudzivirira nekukurumidza nekukurumidza kumhanya. Kuwa kwakakonzera tsaona yekuchengetedza.
Iyo yakavakirwa-mukati yakaoma kuwiriranisa sisitimu inovimbisa kuti kusimudza mafambiro ezvipenga zviviri zvekusimudza zvakanyatsoenderana, uye hapana kuenzana pakati pezvikamu zviviri mushure mekuti chishandiso chakanganiswa.
Yakashongedzerwa neiyo yepamusoro muganho switch kudzivirira kusabatana kubva mukukonzera mota kumhanyira kumusoro.
Iyo michina yekushandisa maitiro ndeinotevera
Dhinda bhatani "Rakagadzirira" kuti upedze otomatiki gadziriro dzinotevera: flip chivharo chinovhura otomatiki - ruoko rwekutsigira runokwira panzvimbo yakachengeteka - pafiripi yakavharika - ruoko rwekutsigira runodonhera pabutiro ndokumirira kuti mota ipinde mukati.
Dhiraivha mota kuti igadziriswe munzvimbo yekusimudza, gadzirisa chinowirirana chinzvimbo cheinotsigira ruoko uye neinosimudza nzvimbo yemotokari, uye tinya iyo "donhedza kukiya" bhatani kukiya. Dhinda bhatani "kumusoro" kusimudza mota kune yakatarwa kukwirira uye tanga basa rekugadzirisa.
Mushure mekugadzirisa kwapera, pinda bhatani "pasi", mota ichawira pasi, mawoko ekutsigira achawedzerwa nemaoko kuchengetedza maoko maviri ekutsigira akafanana kumberi nekumashure kwemotokari, uye mota ichibva chiteshi chekusimudza.
Dhinda bhatani re "reset" kuti upedze wega zvinotevera mabasa ekumisazve patsva: iyo yekusimudza inokwidziridzwa panzvimbo yakachengeteka-pafiripi yakavhurika-ruoko rwadzikiswa mune yeflip cover mashini-iyo flip kavha yakavharwa.
Nokusimudza chinzvimbo 5000kg
Kutakura kugovana max. Ini ndinopesana nemotokari-odirection
Max. Nokusimudza kukwirira 1750mm
Yese Kusimudza (Kudonhedza) Nguva 40-60sec
Supply voltage AC380V / 50Hz （Gamuchira kugadzirisa）
Simba 3 Kw
NW 1920 makirogiramu
Post dhayamita 195mm
Post ukobvu 14mm
Unyanzvi hwetangi remafuta 16L
Pashure: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (E) yakashongedzwa nezambuko-mhando rutsigiro ruoko
Zvadaro: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L6800 (A) iyo inogona kushandiswa kune mana-mavhiri kuenderana
Kaviri Post Inground Simudza
Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza
Kaviri kutumira ingroud kusimudza L5800 (A) nekutakura ...
Kaviri kutumira ingroud kusimudza L6800 (A) iyo inogona kuve iwe ...
Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (E) yakagadzirirwa ...
Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (A) kutakura 3500kg
Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza,